Falanqeyn: Nidaamka Dimoqraadiyeynta Ee Puntland [Qaybta Kowaad] - Horseed Media
Falanqeyn: Nidaamka Dimoqraadiyeynta Ee Puntland [Qaybta Kowaad] September 3, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogle
Xukuumadda hada haysa taladda Puntland waxay wadaa qorshe ay ku doonayso inay wadanka kaga saarto nidaamka wax qaybsiga beelaha ayna ugu rarto nidaamka Xisbiyada badan qorshahaas oo ah mid in badan ay ku taamayeen dadweynaha Reer Puntland.
Maalinimadii shalay waxaa kalfadhi aan caadi ahayn isugu yimi mudanayaasha Golaha Wakiiladda si loo dardargeliyo qorshaha Xukuumada wakhti uu madaxweynihii ku maqan yahay wadanka dibadiisa Horseed Media waxay ka ogaatay xubno ka ag dhow dhow gudiga doorashada 48saac ka hor inuu jiro kulan deg deg ah oo ay isugu iman doonaan Golayaasha Dowladda & Gudiga Doorashadu.
Hadaba muhiimada uu leeyahay nidaamka dimuqraadiyentu darteed Horseed Media waxay bilaabi doontaa Warbixin taxane ah oo lagu lafa guri doono qorshaha Xukuumada warbixintaas oo ka kooban ugu yaraan 5 qaybood waxaa la bilaabi doonaa baahinteeda 15 Sep, 2012 hadaba waxaana soo bandhigi doonaa Falanqayntan oo hor dhac u ah warbixintaas tan oo aanu si kooban uga hadli doono qorshaha Dimuqraadiyeenta Xukuumadda.
Puntland ma u baahan tahay Nidaamka Xisbiyadda badan?
Ma ahan mid muran ka taagan yahay la iskumana hayo in Puntland u baahantahay inay ka guurto Nidaamkii lagu dhisay ee wax qaybsiga beelaha una guurto nidaamka xisbiyada badan (Democratic system) Xukuumadii ugu horaysey ee qabta hogaanka Puntland mandate-keeda ugu weyni wuxuu ahaa sidii ay Dalka uga dabaali lahayd nidaamka asxaabta badan 3 sano gudahood.
Nidaamka wax qaybsiga Beelaha wuxuu awood u siinayey Odayaasha dhaqanku inay soo magcaabaan mudanayaasha Baarlamaanka & kuwa Golayaasha Deegaanka Degmooyinka talaabadaas oo keenta in aan loo soo xulin Golaha Wakiiladda (Hay’adda sharci dejinta) & Golaha Deegaanka mudanyaal ku munaasib ah aana haysan kalsoonida & rabitaanka Dadweynaha ay metelayaan kuwaas oo ay dhacdo qaar kood in lagu soo xulo Eex, Musuq maasuq & Xaal mastuur.
Halka Nidaamka Xisbiyada badani uu fursad u siinayo Dadweynaha reer Puntland inay iyagu soo doortaan xubnaha u metelaya Golaha Wakiiladda & Golaha Deegaanka, muwaadin kasta oo reer Puntland u saamaxaya inuu wax doorto isagana la doorto.
Nidaamka wax qaybsiga beeluhu wuxuu Puntland ku riday dib u dhac isagoo u horseeday la xisaabtan la’aan, mucaraad la’aan, Cadaalad la’aan, ku tagri fal awoodeed & in Shaqadii Hay’addaha Dastuuriga ahi (Golaha Wakiiladda, Garsoorka & Fullintu) ay ku ururto Madaxtooyada oo noqotay Xafiiska wax kasta laga soo jaan gooyo (Madax ka nool) la’aanteedna aan go’aan la gaari karin.
Xukuumadda Madaxweyne Cabdiraxmaan Sh. Maxamed Maxamuud (Faroole) waxaa u qorshaysan inay Dalka u horseedo nidaamka xisbiyada badan sida ay sheegeen marar badan waxayna ka mid ahayd balan qaadkii uu sameeyey Madaxweynuhu wakhtigii uu ku jiray ololaha doorashadda 2009.
Hadda Dowladdu waxay meel marisay Dastuur cusub, waxay soo dhisatay Gudigii doraashooyinka, waxay ansixisay Xeerkii Doorashooyinka Golayaasha Deegaanka talaabooyinkaas oo dhamaantood fure u ah geediga Xukuumadu u tahay nidaamka dimuqraadiyada.
Maamulka Dowladda oo aan baahsanayn.
Tan & 1998-dii markii la asaasay Dowladda Puntland waxay maamulkeeda ku fidin la dahay goobaha ka baxsan Laamiga (Dhinaca Bari & dhinaca Waqooyi) awoodeediina waxay ku koobantay wadada Laamiga ah oo marba dhinac loo sii qaado.
Xukuumada hada talada haysaa waxay ballan qaaday inay Maamulka ku fidin doonto Deegaanada ka leexsan Laamiga hase ahaate ma noqon ballan qaadkaasi mid fula waxaana lagu eedeyey inay maamulka xoogiisii ku koobtay Caasimada Garoowe Madaxweynaha talada hayaa si buuxda ugama degin Laamiga (diili